Isetshenziselwa ukufakwa komoya, ukushisa, amanzi ahlanzekile, ukwelashwa kwamanzi, ukupholisa nokuqinisa amakhaza, ukusakazwa ketshezi, kanye namanzi abandayo angonakalisi nokuhamba kwamanzi ashisayo emkhakheni wokuphakelwa kwamanzi, ukucindezelwa nokunisela. Ukuncibilika okuqinile kuketshezi kuyinto, ivolumu yayo ayidluli u-0.1% wevolumu yeyunithi, usayizi wezinhlayiyana <0.2mm.
I-KQL Direct-coupled in-line Single Stage Vertical Centrifugal Pump
I-Model KQL ingamaphampu we-centrifugal aqonde ngqo ku-line. Zisetshenziselwa ikakhulukazi uhlelo lokupholisa umoya nokushisa. Isakhiwo esiyingqayizivele sokuklama sikunikeza izinzuzo zokuthembeka okuphezulu nokusebenza kahle okuphezulu.
Ukuphakelwa kwamanzi okuphezulu, ukwakha ukuvikela umlilo, ukujikeleza kwamanzi okuhambisa umoya ophakathi nendawo, Ukuhanjiswa kwamanzi okuhambisa ohlelweni lobunjiniyela, Ukusakazwa kwamanzi okupholisa, Ukuhambisa amanzi we-Boiler, ukuhanjiswa kwamanzi kwe-Industrial kanye ne-drainage, Irrigation, izitshalo zamanzi, izitshalo zamaphepha, izitshalo zamandla, ezishisayo izitshalo zamandla, izitshalo zensimbi, izitshalo zamakhemikhali, amaphrojekthi wokonga amanzi, ukulethwa kwamanzi ezindaweni zokunisela, njalonjalo.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwezinto ezingamelana nokugqwala noma ukumelana nokugqoka kungahambisa amanzi angcolile ezimboni, amanzi olwandle, namanzi emvula aqukethe okuqinile okumisiwe.
Zisetshenziswa kakhulu ku- ukucwenga uwoyela, i-petrochemical, imboni yamakhemikhali, imboni yokucubungula amalahle, imboni yamaphepha, imboni yasolwandle, imboni kagesi, ukudla, ezemithi, ukuvikelwa kwemvelo nezinye izimboni.
Nge ukuvezwa yayo evelele ukumelana nokusebenza kahle okuphezulu, i-KXZ chungechunge slurry futha ilungele ikakhulukazi ukuthuthwa slurry eqinile olwalwenza ezifana insimbi slurry kanye namalahle ukuwasha isitshalo. It is kabanzi ezimayini, yokusansimbi, amalahle, amandla kagesi, izinto zokwakha, umkhakha wamakhemikhali, ukongiwa kwamanzi neminye imikhakha.
Imikhiqizo yochungechunge lwe-KZJ isetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, izigayo zensimbi, ukulungiswa kwamalahle, ukuzuza nge-ore, i-alumina kanye ne-flue gas desulfurization amaphrojekthi nezinhlelo zomngcele. It is ikakhulukazi esetshenziselwa ukuthutha slurry olwalwenza equkethe izinhlayiya okuqinile, ezifana futha yokudla ezimayini, ukuthuthwa ugxilisa ahlukahlukene, tailings, ukususwa slag ezitshalweni zikagesi, ukususwa slag ezitshalweni zensimbi, ukuthuthwa kwamalahle slime ezitshalweni zokulungiselela amalahle, imidiya esindayo, njll. Ukuhlungwa kwesisindo slurry kungafinyelela ku-45% wodaka naku-60% we-ore slurry.
It is ikakhulukazi esetshenziselwa amandla okupholisa amanzi ajikeleza amaphampu, amanzi olwandle amaphampu ajikeleza ezitshalweni zetyuwa, izipompo zokuphefumula igesi yemvelo encibilikisiwe, njll. Ingasetshenziselwa ukunikezwa kwamanzi kanye nokuhambisa amanzi emadolobheni, ezimayini zezimboni nasemapulazini.